Qilaafkii Jose Mourinho iyo Paul Pogba oo weji Cusub yeeshay? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Qilaafkii Jose Mourinho iyo Paul Pogba oo weji Cusub yeeshay?
(01-10-2018) Macalinka xulka qaranka France ee Didier Deschamps ayaa soo dhex galay xaalada xun ee ka dhex jirta tababaraha Man United ee Jose Mourinho iyo xidiga kooxdiisa ee Paul Pogba wuxuuna Deschamps ku dooday in Pogba aanu kalidii u guulaysan karin Manchester United balse uuu baahan yahay koox uu la guulaysto.
Didier Deschamps ayaa sheegay in uu muddo shan sanadood ah la soo shaqaynayay Paul Pogba isla markaana uu garanayo waxa uu u baahan yahay si uu guulo ula gaadho Man United. Hadalka macalinka France ee Deschamps ayaa ku soo beegmaya waqtiga ay xaalada Mourinho ee Man United xun tahay kadib guuldaradii West Ham United ka soo gaadhay.
Tababaraha xulka France ee Didier Deschamps oo ka hadlaya xaalada Paul Pogba ku haysata Man United ayaa yidhi: “Paul isaga oo kaliya kuma tiirsana laakiin sidoo kale waxa uu ka tirsan yahay koox, waa sida isku duubnaanta ah ee loo ciyaarayo, xaaladu ma aha hal ciyaartoy oo kooxda guul gaadhsiinaya”.
Didier Deschamps oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Waxaa jira dhawr waxyaabood oo ay dadka waajib ku tahay in ay ogaadaan, ugu horayn waxaa jira sawrika Pual kaas oo aan ka turjumayn cida uu yahay, laga yaabee in ay sababtu tahay in aanu yara caadi ahayn ama uu tilmaan iska yara yahay”.
Intaa kadib Didier Deschamps ayaa ka hadlay muddadii dheerayd ee uu la soo shaqaynayay Pual Pogba wuxuuna yidhi: “Waxa uu isagu ila joogay ilaa 2013 kii taasi waa shan sanadood isla markaana qaabka uu u shaqeeyaa ma aha in uu naftiisa u shaqeeyo waa isaga oo qayb ka ah koox, taas ayaa xaqiiqdii muhiim ah”.
Didier Deschamps ayaa ka hadlay sida saxaafadu ay xaaladiisa u sii xumaysay isla markaana lacagtii ay Man United kula soo wareegtay ay ahayd mid lagu qoslo wuxuuna yidhi: “Sawirkiisa saxaafada ayaa wax walba sii adkaysay. Tirada lacagtii la soo wareegiseed ee Man United waxay ahayd mid lagu qoslo, wax sahlan may ahayn in la maamulo”.
Ugu danbayn Deschamps ayaa ka hadlay xaaladii Pogba ee koobka aduunka ee xulka qarankiisa France wuxuuna yidhi: “Intii lagu jiray koobka aduunka sumcadiisii ayuu soo ceshaday, xaqiiqdii wuu hadlayaa isaga ayayna cadaynaysaa, laakiin waxa ugu muhiimsani waa in Pual uu koobka adunka yimid isaga oo fikrad sax ah haysta, waxa uu isku diyaariyay in uu noqdo championska aaduunka, taas ayaa ahayd wixii uu maskaxda ku hayay”.